အပြောမတတ်တော့ ဆဲသလို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အပြောမတတ်တော့ ဆဲသလို
Posted by ရွှေဘိုသား on Aug 5, 2011 in My Dear Diary | 22 comments
ရွာသားတို.လည်း ကြားဖူးမှာပါ အပြောမတတ်တော. ဆဲသလို ဆိုတဲ. မြန်မာစကားပုံလေးပေါ.ဗျာ တယ်မှန်တယ်ဗျနော် ကျနော်ကတော. လက်ခံတယ်
အဲဒီေ၇ှးပညာရှိတွေရဲ.စကားပုံလေးတွေက တော်တော်ကိုမှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ် ဒီနေ့ ကျနော်တို့ ဆိုင်ကို Customer
တစ်ယောက်ဝင်လာတယ်ဗျာ ထောင်.ဆုံးကစက်ကို သုံးချင်တဲ.အကြောင်းပြောရော ကျနော်တို.ကလည်း window တင်မည်.သူနဲ. software ထည်.မဲ.သူတွေလာရင်
အဲဒီတစ်လုံးထဲ ထောင်.ကပ်နေတဲ. စက်မှာပဲ သွားပြီး လုပ်ပေးတာပေါ.ဗျာ ဆိုင်ရှင်လာရင်လည်း အဲဒီစက်ကလေးပဲ အမြဲလိုလို သုံးတတ်တယ်ဗျစက်သုံးသူက
ထောင်.ဆုံးကစက်လိုချင်တယ်ပြောပြီး သူ. Laptop နဲ.ပဲ သုံးချင်တာဆိုတော. သူကလည်း အေးအေးဆေးဆေးရှိလောက်မယ် ထင်တဲ. ထောင်.ကစက်ကိုလိုချင်တာဖြစ်မှာပေါ.ဗျာ
ကောင်တာထိုင်နေတဲ. ၀န်ထမ်းမိန်းကလေးကအပြောမတတ်တော. အဲဒီစက်ကသူဌေးတွေ သုံးတဲ. စက်လို.ပြောလိုက်ရော
Customer ကမျက်နှာက ဒေါသရိပ်ယောင်တွေ တွေ.နေရပြီ ကျနော်လည်း ပထမတော. ဘာမှဝင်ပြောမပေးသေးဘူး
ကိုယ်ပြင်စရာရှိတဲ. စက်ကလေးပဲ ပြင်နေတာ Customerက ကောင်မလေးကို ဒေါသဖြစ်ပြီး နင်တို.ဆိုင်က သူဌေးတွေ သုံးတဲ. စက်ရယ်လို. သတ်သတ်ခွဲထားတာလားလို. မေးရော
ကောင်မလေးကလည်း သူပြောတဲ. စကားသူမဖြေရှင်းနိုင်တော.ဘူး မနေသာတော.ပဲ ၀င်တောင်းပန်ရတော.တာပေါ.ဗျာ အစ်ကို သူပြောတဲ. သူဌေးတွေ သုံးတဲ.စက်ဆိုတာက
အစ်ကိုထင်သလို VIP တွေအတွက် သတ်သတ်ထားတဲ. စက်မဟုတ်ပါကြောင်း သူအပြောမတတ်လို.ပါ သူပြောတာက ဆိုင်ရှင်တွေ လာလို.သုံးစရာရှိရင် အဲဒီစက်ကလေးမှာပဲ
အမြဲထိုင်သုံးလို. သူကအဲလိုပြောတာပါဆိုတော.မှ Customerကလည်း နည်းနည်းစိတ်ပြေပြီး ဒါဆိုလည်းပြီးရောလေတဲ. ကျနော်လည်း သူကျေနပ်အောင်ဆိုပြီး ရပါတယ် သုံးပါ
အဲဒီစက်ရပါတယ်လို.ပြောရတော.တာပေါ. ပြီးမှ ပြောတဲ. အဓိပ္ပါယ်က သူဌေးတွေလာရင်သုံးတဲ. စက်မို. သူဌေးတွေသုံးတဲ. စက်လို.ပြောလိုက်တာ သူပြောတာလည်းမမှားဘူး
Customer ထင်သလိုဆိုတော.လည်း Customerလည်းမမှားဘူးလို. တွေးမိပါရဲ. သူတို.နှစ်ယောက်မှာ ၀န်ထမ်းကောင်မလေးက အပြောမတတ်တာလို.ပြောလို့ရတယ်
တကယ်လည်း အပြောမတတ်လို. အဲလိုတွေဖြစ်ကုန်တာ သူသာအပြောတတ်ရင် Customer လည်းစိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူး ကျနော်တို့ ဆိုင်က ၀န်ထမ်း ကသာ အစ်ကိုအဲဒီစက်က
ပြင်စရာရှိလို. ဘာညာ ပြောလိုက်ရင် ဟိုကလည်း စိတ်ဆိုးမှာ မဟုတ်တော.ဘူး အဲလိုလိမ်လိုက်လို့လည်း သူလည်းမထိခိုက်သလို တစ်ဖက်သားလည်း မထိခိုက်ပါဘူး
အဲလိုမျိုးကျတော. မလိမ်ကြတာတော့ ခက်တယ်ဗျနော်။ မလိမ်သင်.တဲ. နေရာကျတော. လိမ်ချင်ကြတယ် ဒါကလည်း လူ.သဘာဝပဲ
အပြောကောင်းရင် လေယာဉ် တောင် အလကားစီးရတယ်လို.လည်း ပြောနေကြတာပဲဗျာ တစ်ခါ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်
ဘုရင် စားပွဲတော် ခင်းခါနီး ရဟန်းတစ်ပါး နန်းတော် ရှေ့ကကြွလာတာမြင်တော့ ဘုရင်က သူလှူထိုက်လို.ပဲ ဆိုပြီးတော. ကောင်းပေ.ဆိုတဲ့ ဟင်းတွေ လှူလိုက်သတဲ.
ပြီးတော. စစ်သူကြီးကိုကို အဲဒီ ရဟန်းနောက်ကို လိုက်ကြည့်စေတယ်တဲ. စစ်သူကြီးက လိုက်ကြည့်တော. မြို.အပြင်စရပ်ရောက်တော. ရဟန်းကလူဝတ်လည်းပြီး
အသင်.စောင်.နေတဲ.သူ.မိန်မနဲ.ဘုရင် လှူလိုက်တဲ. ထမင်း ဟင်းတွေ စားသုံးနေတာ တွေ.ရော စာဖတ်သူသာစစ်သူကြီးနေရာမှာဆို ဘုရင်ကို ဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲ?
စစ်သူကြီးလည်း တွေးတာပေါ. ငါအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင် ငါလည်းအသတ်ခံရမယ် ရဟန်းလူထွက်လည်း အသတ်ခံရမယ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးမရှိဘူး
ငါသာအပြောကောင်းလို.ကတော. နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိမယ်လို.တွေးပြီး နန်တော် ပြန်ရောက်တော. ဘုရင်က ဘယ်လိုလည်း စစ်သူကြီးမင်း လို.မေးရော
စစ်သူကြီးက မှန်လှပါဘုရား အကျွန်ုပ် လိုက်ကြည်.နေစဉ် အတွင်းမှာပဲ ရဟန်းအသွင်. ပျောက်ကွယ် သွားကြောင်းပါဘုရားလို. လျှောက်လိုက်သတဲ.
ဘုရင်ကြီးလည်း ပီတိ တွေဖြစ်တာပေါ. သူလှူလိုက်တဲ. ရဟန်းက သာမန် ရဟန်းမဟုတ်ပဲ ရဟန်းတာ ဖြစ်နေတာလို. ထင်သွားပြီး စစ်သူကြီးကိုလည်း ဆုလာဒ် တွေပေးပေါ.
စစ်သူကြီး လျှောက်လိုက်တာကလည်း အမှန်တိုင်းပါပဲ ရဟန်းအသွင် ပျောက်ကွယ် သွားပြီး လူဝတ်လဲသွားပြီလေ သူလျှောက်တင်လိုက်တဲ. ရဟန်းအသွင်ပျောက်ကွယ်သွားတာက
အထက်ပဲဈန်နဲ. ကြွသွားသလို လျှောက်တင်လိုက်တော. ဘုရင်လည်း သဘောကျပြီပေါ. အလျှောက်ကောင်းတော. အထောင်းသက်သာတာပေါ. ဒီလိုပဲ
ကျနော်တို့လည်း နေ.စဉ် တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု တော.ကြုံတွေ့နေရတာပဲ အလျှောက်ကောင်းဖို.တော့ လိုတာပေါ့ဗျာ စောစောက စစ်သူကြီးသာ အမှန်တိုင်းလျှောက်လိုက်လို့ကတော.
ဘုရင်လည်း စိတ်ထိခိုက်မယ် ရဟန်းလူထွက်လည်း အသတ်ခံရမယ် စစ်သူကြီးလည်း ကြားထဲက အသတ်ခံရနိုင်တယ် အခုတော. စစ်သူကြီးက ပညာသားပါပါ လိမ်စရာမလိုပဲ
အမှန်ကိုပဲ ယုံနိုင်အောင် လျှောက်တင်လိုက်တော. အကုန်လုံး အကျိုးမယုတ်တော့တာပေါ့ သူလျှောက်တင်တာကို ကျနော်သာဆိုလည်း ဘုရင်ကြီး ထင်သလို ထင်မှာအသေချာပဲ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မုသားမပါ လင်္ကာမချော လို.ကလည်း ရှိသေးတာမလား စကားလုံး လှအောင်တော့ မုသားက မပါမဖြစ်ပါရတာပဲလေ
ကိုယ်လိမ်ပြောလိုက်ရင် ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ. မုသား စကားက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဘယ်သူ.ကိုမှ အကျိုးမပျက်စီး ဘူးဆိုရင် မုသာဝါဒ ကံမထိုက်ဘူးလို.တော. ကြားဖူးတာပဲဗျာ
ဟုတ်မယ်လည်း ထင်ပါတယ် စောစောက စစ်သူကြီးလိုပေါ.ဗျာ သူအဲလို လိမ်လိုက်လို. ဘယ်သူ.မှ မထိခိုက်အောင်တော. လိမ်ဖို. လိုတာပေါ. ကိုယ်သုံးတဲ. မုသားစကားက
ဘယ်သူ.မှ အကျိုးမပျက်စီးပဲ အကျိုးရှိမယ်ဆို မုသားလေးတော. သုံးပေးပေါ.ဗျာ
သစ်ပင်ဖြောင်. တက်၇ခက် စကားဖြောင်. ကြားရခက် ဆိုတဲ. စကားပုံလေးတွေလည်း ရှိတာပဲ
စောစောက စစ်သူကြီးနဲ. ကျနော်တို. ဆိုင်က ၀န်ထမ်း ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ဆို ဘယ်သူမှ လိမ်ပြောပဲ စစ်သူကြီး ပြောတဲ. စကားက နားထောင်တဲ.တစ်ဖက်သား နားဝင်ချိုစေတယ်
ကျနော်တို.ဆိုင်က ၀န်ထမ်းပြောလိုက်တဲ. စကားကျတော. ကြားရတာ နားခါးစေတယ်လေဗျာ ဒါ.မို. တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ပညာသားပါပါ စကားကို ချိုချိုသာသာ ဖြစ်အောင်
ပြောကြပါလို. တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် အမှန်တိုင်း မပြောသင်.တဲ. စကားတွေကလည်း အများကြီး ပဲလေဗျာ
ဒါ.ကြောင်. အပြောအဆို လေးတွေကို တစ်ဖက်သား နားဝင်ချိုအောင် ပြောစေချင်ပါတယ်
ကျနော် တွေ.ကြုံတာလေးနဲ. ဖတ်ဖူးတဲ. စာစုကလေးကို နှိုင်းပြီး ရေးထားတာပါ စာဖတ်သူရောဘယ်လိုမြင်မလဲတော. မသိဘူး ကျနော်ကတော. အမှန်တိုင်းပြောတာချင်းအတူတူတောင်
စစ်သူကြီးရဲ. စကားပြောတတ်တဲ. ပညာကို သဘောကျမိတယ်ဗျာ
ဝေဖန်ပေးကြပေါ.ဗျာ ကျနော်ကတော.ကိုယ်ထင်တာရေးလိုက်တာပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Error: The Article or News you have entered is too short. Please lengthen your article to at least2paragraphs.
စာတိုလွန်းသည်။ စာဖတ်သူများတွင် တခုခုအကျိုးရှိစေရန် အနည်းဆုံးစာပိုဒ် ၂ပိုဒ် ကြိုးစားရေးပါ။
အဲဒီစာကြောင်းကြီး Publish နှိပ်ပြီးရင် တက်တက်နေတော. ကိုယ်တင်ထားတာ
မရသေးဘူးထင်ပြီး နှစ်ခါတင်မိထားတယ် သူကြီးပဲ ဖျက်ပေးပါတော.ဗျာ
ဖတ်လို့ ကောင်းပြီး ဗဟုသုတ အသိပညာ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ပို့ စ် တစ်ခု ပါပဲ
ဒီလို မျိုးလေး တွေ နောက်ကို ဆက်လက် ဖတ်ရှူပါရစေ လို့ရွှေရွှေ့ ကို တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ ။
အပေါ်က ပြောသလို ပဲ
နေ့ တဓူဝ ရှင်သန် နေရတဲ့ ဘ၀ ထဲ မှာ
စကားကို ထိန်းသိမ်းပြောဆိုနေကြရတာ အမှန်ပါပဲ
လိမ်တာ ကို မပြောနဲ့ ဦး
အမှန်ကို ပဲ ပြောမယ် ဆိုရင်ကို
ပြောသင့်တဲ့ အချိန် မပြောသင့်တဲ့ အချိန်
ဒေါသနဲ့ ဆဲသလိုဖြစ်သွားတာလေးတွေကို တောင်းပန်ပါရဲ့ရှင်
ဒီလို စာမျိုးဖတ်၇တော. ကိုယ်.တွက်
ဗဟုသုတ တစ်ခု တိုးတာပေါ.ဗျာ။
ဟုတ်တယ် … စကားပြောအဆို ကလည်း ဆိုလို၇င်းမှားသွား၇င် မကောင်းပြန်ဘူး ။
ဦးပေါက်ပြောသလို …ကောင်မလေး တွေ အတိုတွေဝတ်ပြီး အထိုင်မတတ်တော့ ….
အမေက တော့ ကားပေါ်မှာ ကောင်မလေး တယောက် ထိုင်နေတာ မြင်မကောင်းလို့ သူ့မှာ ပါလာတဲ့ 
ကျွတ်ကျွတ်အိတ် အကြီး ကြီး သွားပေးပြီးပြောသေးတယ် … ဟဲ့ ကောင်မလေး ရော့ ဒါ ယူပြီး ဖုံး ထားတဲ့
အဲဒီ့ ကောင်မလေးလည်း ယူထားပါတယ် … သူကိုယ်တိုင် လည်း ထိုင်မရလောက်အောင် ဖြစ်နေလို့
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်ဆံရတာက စကားနဲ့ပဲဆိုတော့ စကားပြောတာကအရမ်းပဲအရေးပါတယ်လေ။နီလေးတို့ရုံးမှာဆိုတော့ လူကြီးစိတ်မကြည်တဲ့အချိန် စကားသွားမပြောလိုက်နဲ့ အဲဒီနေ့တော့ ခံရပြီသာမှတ် စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ် ဘာတဲ့ “အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါအရ ” တဲ့
စကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်သေးတယ်။ တခါတလေ ကိုယ်က ဘာရယ်မဟုတ် ရိုးရိုးပြောတာကို ကာလာပါတယ်ထင်သေးတာ။ အစွန်းမထွက်အောင် သတိထားပြောနေရလို့ စကားတောင် သိပ်မပြောရဲတော့ဘူး။
မှန်လိုက်တာ.. မြန်မာစကား ပြောရခက်ဆုံးပဲ.. တစ်ခါတစ်လေ ပို့ချင်တဲ့နေရာကို ရောက်မသွားပဲ
ထွေပြားသွားတတ်ပါတယ်… ခက်ခဲထွေပြားတဲ့ ဘာသာစကားတစ်မျိုးပါ..သင်ယူရပါအုံး မယ်…။
အင်း. အလျှောက်ကောင်းတော့အထောင်းသက်သာတာပေါ့။ခုနေ ဘုရင်ကြီးသန်းရွှေနားမှာအလျှောက်ကောင်းအတင်အပြကောင်းလွန်းတဲ့ စစ်သူကြီးတွေပေါလို့ နေမှာ။ဆရာလူထုစိန်ဝင်းရဲ့အစိုးရကမိဘလား ပြည်သူကမိဘ လားဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ကြပါနော်
အပြောမတတ်တာ ပြင်ပေါ့ကွယ်။ အထိုင်မတတ်တာတော့ ရှိပါစေ ရှိပါစေ… ဂလု…။
စကားအကျအနကောက်တတ်သူတွေနဲ့ စကားပြောရရင် တော်တော်ခက်တယ် … သတိထားပြီး ထိန်းပြောရတဲ့အလုပ်ကလဲ တော်တော်ပင်ပန်းပါတယ် …
မြန်မာနိုင်ငံက အာဏာပိုင်တွေ ပြောသလို လိုက်ပြော
အပြောမတတ်လို့ ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့လူတွေ တပုံကြီးမှ တပုံကြီး
ဒေါသစိတ်နဲ့ ပြောတဲ့စကားအများစုက အပြောမတတ်သလိုဖြစ်တတ်ပါတယ် …
အဲ့ဒီအကြောင်းကို ခဏခဏ ဒေါသထွက်တတ်တဲ့ ကျွန်မက အသိဆုံးပေါ့
စာရေးသူရဲ့ အာဘော်နဲ့ အရေးအသားကိုတော့ ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရင်ကြီးနဲ့ ရဟန်းအတု ဥပမာက လက်တွေ့နဲ့ ကင်းကွာနေတယ်။ ကြည့်လေ………… ဘုရင်စားတော်ခေါ်မှာကို ရဟန်းအတုက ဆွမ်းခံတယ်ဆိုတော့ တော်တော်မိုက်မဲတာလို့ပြောလို့ရတယ်။ ဟုတ်ပါပြီ၊ ဘုရင်က သဒ္ဒါလို့လောင်းလိုက်ပါပြီတဲ့။ ဘာကြောင့်လိုက်ကြည့်ခိုင်းရတာလဲ။ မသင်္ကာလို့လား……။ ရဟန်းအတုနဲ့ ရဟန်း အစစ်ရဲ့ အဂါင်္ရုပ်ကိုတော့ နိုင်ငံအဝှမ်းမင်းလုပ်နေတဲ့ ဘုရင် သိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဘုန်းကြီးနောက်လိုက်ကြည့်တဲ့ကိစ္စကို စစ်သူကြီးကို ခိုင်းရတယ်လို့ ၊ တခြား အစေအပါးတစ်ယောက်ကို ခိုင်းလိုက်ရတာပဲ။ ဒီကိစ္စရဲ့ အရေးပါမှုအရလေ။
နောက်တစ်ခုက သူ့ဖာသာသူ ရဟန္တာဖြစ်ဖြစ်၊ ရဟန်းတုဖြစ်ဖြစ် စစ်သူကြီးက သေစရာမလိုပါဘူး။ ဒီလောက်ဒီ ဗြဲလရမ်းနိုင်တဲ့ ဘုရင်ရှိနေခဲ့ရင်တောင် ဥပမာအနေနဲ့ ထည့်မပြောသင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရေးတဲ့ စာရဲ့ အရသာပျက်တယ်။
အဲဒီလို စစ်သူကြီးပုံပြင်တွေမျိုးတွေက… မြန်မာဘာသာရေးတရားဟောတာတွေမှာ.. သိပ်များလွန်းတယ်..။ အခုလို စိစစ်ဝေဖန်တဲ့စိတ်နဲ့ ချည်းကပ်ဆွေးနွေးလာတာတွေ့ရတော့ ၀မ်းသာမိပါတယ်..။
susunosuki ကအစ်ကိုလား အစ်မလားတော.မသိဘူး
ထောက်ပြတာတော. ဖြစ်သင်.ပါတယ် အဲလိုလည်း တွေးဖို.ကောင်းပါတယ်
ဒါပေမဲ.လည်း ကျနော်ကလည်း လစဉ်ထုတ်နေတဲ. မင်္ဂလာမောင်မယ် စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ
ဖတ်လိုက်ရလို.ပါ ဘယ်လကထုတ်လည်းဆိုတာတော. သေသေချာချာမမှတ်မိတော.ပါဘူး
ကျနော်.အထင် ဘုရင်လိုက်ကြည်.ခိုင်းတာက မသင်္ကာလို. မဟုတ်လောက်ပါဘူး
ဘယ်မှာ သတင်းသုံးတာလည်း သိချင်တာဖြစ်ပါလိမ်.မယ်
စစ်သူကြီး သေစေနိုင်ပါတယ် အဲဒီလောက် ဗြဲလရမ်း တဲ.ဘုရင်တွေ ရှေးအခါက တော်တော်ပေါပါတယ်
တိုင်းပြည်သာအုပ်ချုပ်တာ ဘာမှ မစဉ်းစားပဲ သူရဲကောင်းတွေကို သတ်ပြစ်တဲ. မင်းတွေလည်း
Another approach, the king expected that the monk will be holy one (he may thought the holy monk came his palace by his glory) at that era.Then, he wanted to get the important confirmation from the high ranking officer (sit thu gyi) instead of an ordinary staff.Thus, we can conclude that two kinds of man.First one is an “over cofidence-king” and second is human parasite (kut phar-sit thu gyi).
This story has been pointing out the nature between leader and follower.